Wax kastoo ganacsi ah, otomatiggu waa furaha guusha waana inuu noqdaa furaha.yoolka ugu dambeeya kuwa doonaya inay dhisaan ugu yaraan hal dakhli lix lambar ah internet-ka. Laakiin otomatigga wax walba had iyo jeer ma sahlana, dadkuna badanaa waxay isku arkaan inay ku xayiran raadinta aan dhammaanayn, ama ma yaqaaniin meel ay ka bilaabaan (iyo halka ay ka joogsanayaan).
Koorsadani waxay ku siinaysaa waxyaabo kooban, dhakhso leh oo wax ku ool ah si aad otomaatig uga dhigto suuqgeyntaada. Sidoo kale waa koorsada hordhaca ah ee koorsada dhameystiran ee ku saabsan otomaatiga dhameystiran ee suuqgeyntaada "Ka suuqgee suuqgeyntaada A ilaa Z, iyo wax intaa ka badan!"
Qalabaynta suuqgeyntaada Janaayo 10th, 2021Tranquillus
READ Ku dhawaaqida go'aan aan la jecleysan: maxaa la sameeyaa?
horeNidaamka Deegaanka oo Si Fiican Loogu Iibin Karo Facebook
socdaSuuqgeynta emaylka ee bilowga ah